Hyundai smart silicone mkpuchi mkpuchi ikpe
Nkọwa:Hyundai Smart Key Cover,Hyundai Smart Key Case,Hyundai Smart Silicone Key Cover
Home > Ngwaahịa > Epeepe mkpuchi Silicone Car > Hyundai smart silicone mkpuchi mkpuchi ikpe
Ihe Nlereanya.: Hyundai3101
Ụlọ ọrụ anyị dị na certification ISO9001 na BSCI, anyị bụ ndị ọkachamara na Cover Car Key Cover maka afọ 8, anyị nwere ihe karịrị 100 ndị ọkachamara . All Silicone Car Key Case na 100% nri grade silicone, n'ihi ya, anyị na-emepụta ọ bụla Silicone Ime Key Ileba mara mma, inogide na ejiji. Mkpuchi Silicone Key Cover bụ otu n'ime ahịa na-ere ọkụ nke ụgbọala anyị dị na Silicone Car n'ihi na ọ na-emetụ aka, na-enweghị isi, na-enwe mmekọrịta enyi na enyi. hyundai smart key cover dị ka foto ndị na-esonụ bụ 3 bọtịnụ embossed, na logo ụgbọ ala. Anyị nwere obi ike na ị ga-enwe afọ ojuju maka akpọrọ ihe nchọgharị dị elu nke hyundai anyị .
Ileba ọ bụla nke Silicone Remote Car nwere atụmatụ ndị a:
1. Na-eme 100% silik
2. Na-ekpuchi Carkell Car Remote bụ nke zuru oke maka igodo ụgbọala Hyundai .
3. Anyị nwere ike ime ihe ọ bụla ị ga-eji na-achagharị agba ọkpụkpọ ụgbọala ụgbọala dị ka ị chọrọ.
4.Ọ bụrụ na ị na-ejide Ọkpụrụkpụ Ụgbọ ala nke Remote Fob n'aka gị, ọ na-adị nro, dị ụtọ na ìhè. na azụ nke mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala na mpempe akwụkwọ ụgbọ ala.
5. Ọdịdị okpomọkụ: -40 centigrade na 210 centigrade.
6. Onye na- ejide ụgbọ mkpịsị uhie nwere àgwà ndị na-adịghị emerụ ahụ, gburugburu ebe obibi, mmegide okpomọkụ, ihe na-adịgide adịgide, mmiri na-adịghị ọcha, ihe nkwụ.
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa:
onye ọ bụla silicone ụgbọ ala isi akpa ke opp bag
1000pcs kristal mkpụrụ ego isi okpu ke kiet ke otu katọn
katọn size: 58 * 26 * 38cm
Ọrụ anyị maka Slicone Car Cover Cover ma ọ bụ mkpuchi ikpuchi Silicone
3 Button mkpọchi Silicone Car Cover Cover Maka Fiat Kpọtụrụ ugbu a
OEM Ejiri mkpuchi mkpuchi Silicone maka Fiat Kpọtụrụ ugbu a
Nyocha ọhụrụ nke Silicone Car Key Case maka Fiat Kpọtụrụ ugbu a
Akpa mkpuchi akpọrọ mkpuchi Silicone Car Ford Kpọtụrụ ugbu a
Hyundai Smart Key Cover Hyundai Smart Key Case Hyundai Smart Silicone Key Cover Honda Smart Key Cover Hyundai Sonata Key Cover Audi Smart Key Cover Hyundai I20 Smart Car Key Cover Hyundai I20 Car Key Cover